RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Liverpool ka adkaatay Swansea City ee Premier League – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey kulankii ay Liverpool ka adkaatay Swansea City ee Premier League
Haaruun October 1, 2016
(England) 01 Oktoobar 2016. Liverpool ayaa guul ciriiri ah ka gaartay Swansea City oo ay marti ugu ahayd garoonkeeda kaddib markiii ay ku martay 2-1.
Bilowgii ciyaarta daqiiqadii 8-aad ayaa waxaa goolka u dhaliyay Leroy Fer kaddib markii uu ku taabtay uun baas uu u soo dhigay saaxiibkii Mike van der Hoorn, sidaas ayaana lagu kala nastay.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta daqiiqadii 54-aad ayaa waxaa Liverpool gool madax ah ugu bar-bareeyay xiddiga reer Brazil ee Roberto Firmino kaddib caawimaad uu ka helay Jordan Henderson.
James Milner ayaa hogaanka u dhiibay Reds daqiiqadii 84-aad kaddib markii uu dhaliyay gool ku laad ama rigoore lagu galay isla laacibkii dhaliyay goolkii hore ee Firmino, Liverpool ayaana ku adkaatay 2-1.
>- Kooxda Liverpool ayaa hadda dhalisay goolasha ugu badan kulamada martida sanadka 2016 oo ah 28 gool, waana in ka badan kooxaha kale ee Premier League.
>- Leroy Fer ayaa Swansea City u dhaliyey goolkiisii afaraad ee Premier League xilli ciyaareedkan.
>- Kooxda Liverpool ayaa kulankan ku guuldarreysatay inay qeybta hore ee ciyaarta shuut bartilmaameed sameyso markii ugu horreysay Premier League xilli ciyaareedkan.
>- Roberto Firmino ayaa dhaliyey 3 gool saddexdiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu Premier League u ciyaaray kooxdiisa Liverpool.
>- Ma jiro ciyaaryahan ka tirsan Liverpool oo ku lug yeeshay inta gool oo uu ku lug leeyahay Premier League Roberto Firmino, tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, waxaana wiilka reer Brazil uu ku lug leeyahay tan iyo markaas 20 gool, (13 gool waa uu dhaliyey halka 7 kale uu dhiibay ama caawiyey).
>- James Milner ayaa dhaliyey afar gool ku laad ama 4 rigoore xilli ciyaareedkan, waana in ka badan koox kasta inta ay dhalisay.
>- Dhammaan afarta gool oo uu Premier League ka dhaliyey xilli ciyaareedkan James Milner ayaa ah gool ku laad ama rigoore.
>- Kooxaha Liverpool ayaa guul gaartay afar kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay iyadoo ka hoos ciyaaraysa tababare Jürgen Klopp.
PREMIER LEAGUE: Chelsea oo dib ugu soo laabatay Jidkii guusha…+SAWIRRO
Antonio Conte oo sheegay sababtii uu keydka ugu cabay Fabregas iyo Ivanovic